Windows 10 - Peji 2
Chii chinonzi default mail app chinoita? Iyo inovhura iyo mail app chero iwe paunodzvanya pane tsamba-kuemail link pawebhu peji. Kunze kwebhokisi, iyo default mail app ndeyeMail app inouya nayo Windows 10. Asi kana urikushandisa Microsoft Outlook, iwe unoda kuchinja iyo default mail app kuAptlook, pachinzvimbo cheMail app iyo isina kumbogadzirirwa yako email account. [Verenga zvakawanda ...] nezve dzakasiyana Nzira dzekumisikidza Default MailTo App pa Windows 10
Windows 10 Kurumidza Tip: Maitiro Ekuti Uchinje Iyo Yekutsvaga Injini paEdge's Nyowani Peji Peji
Microsoft itsva Edge browser yakandikurumidza kundikunda kubva payakachinjirwa kuChromium codebase. Iyo yakasarudzika nyowani nyowani peji iri zvinoshamisa zvinoshamisa kuona pese pandinorova iro diki rekuwedzera bhatani kuti uvhure. Yakagadzirwa zvakanaka neinfo yemamiriro ekunze, bhokisi rekutsvaga, nzvimbo dzakabayirirwa pamwe chete nenzvimbo dzinonyanya kushandiswa, uye yakanaka yepashure Bing mufananidzo unoshanduka… [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows 10 Kurumidza Tip: Maitiro Ekuti Uchinje Iyo Yekutsvaga Injini paEdge's Nyowani Peji Peji
Muna 2020, Microsoft yakatanga kuyedza yakagadziridzwa OOBE (kunze kwebhokisi ruzivo) sikirini ine sarudzo itsva kubatsira vashandisi kumisikidza yavo nyowani kana yekare chishandiso mushure Windows 10 Iyo kambani ichiri 'kuongorora' iyo pfungwa uye zvinoita sekunge iyo Zvirongwa app iri kuvandudzwa neiyo nyowani 'Chishandiso Chekushandisa' chikamu kubatsira vashandisi kugadzirisa yavo kifaa mushure mekunge vasiya iyo… [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows 10 irikuwana 'Mashandisiro Ekushandisa' zvigadziriso zvemunhu
Maitiro Ekugonesa PowerShell Remoting mu Windows 10
Kusiyana Windows Server, PowerShell Remoting haina kupihwa simba ne default mu Windows 10. PowerShell Remoting ndeye yakachengeteka manejimendi protocol (WSMan) yekubatanidza nekugadzirisa zvishandiso zviri kure. Mukugadzirisa kwayo kusingaperi, PowerShell Remoting inochengetedza traffic pamusoro peHTTP. Yakagadzirirwa kuti ishandiswe mune yeAnoshanda Directory (AD) nharaunda, inodzivirira iyo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekugonesa PowerShell Remoting mu Windows 10
Microsoft yakaburitsa yakagadziriswa shoma mwedzi uno, yakazara chete makumi mashanu nenomwe.Asi anosanganisira zvigamba zve zero-zuva kukanganisa muWin56k chikamu uye zvimwe zvakakomba TCP / IP networking stack kutadza. Windows uye Windows Server yaFebruary yekuwedzera yekuvandudza (CU) ye Windows 10 inouya nechikwata che zero-zuva Kukwidziridzwa kweRopafadzo chikanganiso (CVE-2021-1732)… [Verenga zvakawanda ...] nezve Patch Chipiri - Kukadzi 2021